Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya waxay diyaarinaysaa inay Somaliya dib u qabsato
Itobiya waxay diyaarinaysaa inay Somaliya dib u qabsato
Hadalkaa waxaa yidhi Dr. Zakariya Haji Cabdi oo idaacada (RBC) ay wareysatay isagoo ku sugan caasimadda dalka Ertreeya ee Asmara. Dr Zakariya oo madax ka ah isbahaysiga la magac baxay (Alliance for the Re-liberation of Somalia ARS) Isbahaysiga Dibuxoreynta Somaliya ayaa wuxuu ku eedeeyay inay Itobiya isu diyaarinayso inay ciidamadeeda mar labaad qabsadaan Somaliya iyagoo buu yidhi doonaya inay taageeraan xukuumadda liidata KMG ee daciifka ah.
Wuxuu sheegay Dr. Zakariya in ila-wareedyo ku sugan Addisababa ay u sheegeen in Itobiya ay diyaarinayso ciidankaa ka dib markii uu ka codsaday madaxweynaha DKG Sheekha Shariif KT Meles Zinawi.
Wuxuu uga digay Dr. Zakraiya umadda Somaliyeed inuu ku soo socdo weerar la mid ah midkii ay Itobiya soo qaaday 2006dii isagoo waliba hoosta ka xariiqay inaysan Itobiya waligeedba faraha kala bixin arimaha Somalya.
Waxaan aaminsanahay buu yidhi Dr Zakriya in ugu yaraan 1500 oo jawaasiista Itobiya ah ay joogaan Muqdisho iaygoo waliba ciidamadooda ay dadka cashuur kaga qaadaan Kalabaydh oo ka tirsan gobolka Hiiraan.
Arimahan uu sheegay Dr Zakariya waxaa sii xaqiijinaya rabitaanka KT Meles uu ku doonayo inuu dagaal galiyo shacabka Itobiya inta ka horeysa kacdoonada ay abaabulkeeda wadaan mucaaradka si shacabka loo yidhaahdo –wax walba xagga difaaca dalka – waxayna ka mid tahay tabaha ay xukuumadaha kalitaliska ah adeegsdaan marka ay dareemaan mucaaradka gudaha kaga shidan oo sii xoogaysnaya. Dhismaha Biyaxidheenka uu ku dhawaaqay in laga dhisayo xadka Suudaan meel agteeda ah iyo hayikicinta shacabka in xoolo loo guro mashruucan balaadhan iyo daandaansiga Masar intaba waxaa ka dambeeya fikradaa aan horey ku tilmaanay.